Koox hubeysan oo maanta toogasho ku dilay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska Prof. Jawaari – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Koox hubeysan oo maanta toogasho ku dilay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska Prof. Jawaari
Koox hubeysan ayaa maanta toogasho ku dilay C/qaadir Qaasim Mursal oo hore uga tirsanaa xildhibaanada baarlamaankii dowladii KMG aheyd islamarkaana uu madaxweynaha ka ahaa C/qaasim Salaad Xasan, xilli uu ku sugnaa agagaarka xerada Bad-baado ee ku taalla degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee C/qaadir Qaasim Mursal ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu ka mid ahaa shaqaalaha haatan ka howlgala xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Kooxdii dilka geystay ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen, iyagoona horey usii qaatay gaarigii uu watay marxuumka la dilay.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka degmada Dharkeenley oo dilka kadib soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa halkaasi ka sameeyay baaritaano ay ku baadi-goobayaan kooxihii dilka ka dambeeyay.
Dhinaca kale, ciidankaasi ayaa la sheegayaa inay eryadeen kooxihii dilka geystay, iyagoona ugu dambeyn ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan gaarigii marxuumka la dilay, balse kooxihii dilka geystay ayaa baxsaday.
Si kastaba ha ahaate, dilkaan ayaa ka mid ah dilalka muddooyinkii ugu dambeysay kusoo badanayaay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, tan iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.